तिमीलाई खोजुँ कहाँ?
सानु शर्मा, (-)
कहाँ गयौ कता गयौ माता जननी?
100-101 ICND1 dumps
खोजुँ म तिमीलाई कसोरी कुन देशमा पुग्यौ1Y0-A20 exam
कुन देशमा जाऊँ म , कुन देशमा खोजुँ म?
जता जान्छु म, तिमीलाई नै खोज्छु म।
किन तिमी यसरी लुकेकी हौ?
तिमीलाई खोज्न म कहाँ कहाँ गएँ
तिमीबिना म हिँड्न सक्तिनँ
तिमीबिना म बस्न सक्तिनँ।swarovski pendant necklace
चारैतिर घेरे हामी सबैलाई
हे माता जननी आऊ अब त।
कालो अँध्यारो रात्रिलाई छेडी तिमी आऊ।
अब उज्यालो बाटो देखाइदेऊ मता जननी
सारा सन्तान तिम्रो बाटो हेरिरहेछन्।
आऊ अब ता तिमी आऊ